Qorshee dhaqaalahaaga | Hallå konsument - Konsumentverket
Ku cusub Swiidhan: Qorshee dhaqaalahaaga
Haddii aam maareynayso dhaqaalahaaga, waxaad ka fikiri doontaa wax badan. Halkan waxaad ka akhriyi kartaa waxyaalaha saameyn ku yeelan kara kharashaadkaaga.
Waxa wanaagsan in aad qorsheyso dhaqaalahaaga bil kasta. Taas waxa loo yaqaanaa miisaaniyad (budget) iyadoo sharaxeysa dakhligaaga iyo kharashaadkaaga. Tasi waxay ku tusi doontaa lacagta inta kuu soo hadhaysa si aad u isticmaasho bil kasta. Dakhliga waa muhiim si aanad u iibsan wax aanad awoodi karin si aad deyn u gasho. Riix linkiga si aad u sameyso adiga miisaaniyadaada adigoo isticmaalaaya aalada Miisaaniyad Xisaabiyahayaga (Budgetkalkylen) ee bogga.
Isku dey Miisaaniyad Xisaabiyaha (Swedish)
Haddii aad doonayso inaad lacag amaahato
Haddii aad u baahan tahay inaad lacag amaahato, waxa muhiim ah inaad soo ogaato nooca ay yihiin amaaha la heli karraa. Waxa aad markaa dooran kartaa amaahda adiga sida saxa ah kuugu haboon. Waxa la socda kharsh marka aad lacag amaahato. Soo ogow nooca ay tahay ribadda waxku oolka (effektiv ränta) ee saaran amaahda. Ribadda wax ku oolka waa qadarka kharashka ee lagugu siinaayo deynta xiliga halka sanno.
Wax dheeraad ah ka sii ogow deyn qaadashada
Ha qaadan amaah degdeg ah (amaah dakhso ah) iyadoo aanad marka hore soo ogaaneyn kharashkeeda. Tani waa sida ugu qaalisan ee lacag lagu amaahdo. Amaahda degdega waa amaaho yaryar oo ay tahay in lagu bixiyo wakhti yar oo gaaban. Waxa aad, tusaale ahaan, qaadan kartaa amaah degdeg ah oo SEK 10,000 ah iyadoo aad fariin SMS ah u direyso shirkada amaahaha bixisa. Amaahda degdega waxa la socda kharash iyo ribbo aad u badan. Amaahda degdega waxa kale oo loo yaqaanaa deyn yar (mikrolån) amaamaanda SMS (sms-lån).
Caymiska ayaa caawiya haddii uu shil dhaco
Caymisku (försäkring) waa heshiis aad la gashay shirkad caymis. Heshiiskaa waxa uu ku siinayaa magdhow haddii wax aad leedahay uu jabo ama la xaddo. Haddii alaabaha ay tusaale ahaan, ku baab'ado dab qabsad ama shil gaadhi. Waxa muhiim ah in caymis la qaato adiga naftaada, gurigaaga iyo waxyaalaha kale ee qaaliga daboola.
Lacagta loo diraayo waddan kale
Miyaad lacagta u dirtaa waddan kale? Haddii ay haa tahay, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad isticmaasho bogga Lacagta Ka timid Swiidhan (Money from Sweden). Kaasi waa adeeg internedka oo ay bixiso Konsumentverket iyadoo kuu suurto galinaysa inaad is barbar dhigto kharashka loogu diraayo lacagta waddan kale.